भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौंमा, परराष्ट्र सचिवले गरे स्वागत ! - Sidha News
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौंमा, परराष्ट्र सचिवले गरे स्वागत !
काठमाडौं। भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम् जयशंकर नेपाल आइपुगेका छन्। उनी बुधबार सवा १२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा अवतरण गरेका हुन्। उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले स्वागत गरे। विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन्। उनी तीन वर्षको अन्तरालपछि नेपाल-भारत दुईपक्षीय समग्र विषयमा छलफल गर्न २५ सदस्यीय उच्च अधिकारीको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं ओर्लिएका छन्।
उनले बैठकमा सहभागी हुनुअगावै शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग जयशंकरले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र दुईपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्नेछन्। उनले भारतीय दूतावासमा केही राजनीतिक भेटवार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ।
विदेशमन्त्री जयशंकरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। उनी विदेश मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा आएपछि पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। उनले २०७२ असोजमा गरेको राजनीतिक भेटघाटको अवस्थालाई चिर्न पनि अहिलेको भेटघाट महत्वपूर्ण रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
बैठकमा दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली र एस जयशंकरले आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि प्रस्तुत एजेन्डामा विषयगत छलफल हुनेछ। विभिन्न पाँच क्लस्टरमा छलफल भएपछि बैठक बिहीबार सकिनेछ।
उज्वलको सकारात्मक छवि अनुकरणीय : कांग्रेस नेता कोइराला
अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याएर सरकारले संविधान उल्लंघन गर्‍यो : विपक्षी गठबन्धन (विज्ञप्ति)
सुनको मूल्य घट्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
ओलीले भाजपा सरकारलाई हिन्दुराष्ट्रसहितको राजसंस्था फर्काउने वाचा गरेको’ श्यामशरणको टिप्पणी
देशको ऋण तीन वर्षमा दोब्बर : आठ खर्ब ४३ अर्बबाट बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब
दुई दशकमै पहिलोपटक नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक
सुनको मुल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?